करिश्माले शेयर गरिन् राजेश सँगकाे फाेटाे फ्यानले गरे यस्ताे कमेन्ट ….. - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
. मलिकाले साथ छाडेपछि ‘सत्यम्’ मा राजेशलाई साथ दिन उपासनाको इन्ट्री !
. राजेश हमाललाई धोका दिदैँ चलचित्र ‘सत्यम्’बाट बाहिरिन् मलिका महत
. दुबई पुगेका हमाल दम्पत्तीले शेयर गरे यस्ता तस्विरहरू
. राजेश हमालले गाएको गीतको भिडिओ सार्वजनिक
. राजेश हमाललाई रोशनी शाहीको प्रश्न: कहिले हो, शुभ समाचार सुन्न पाइने ?
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: बिहीबार, जेठ ६ २०७८ १६:२९:३६
#करिश्मा मानन्धरराजेश हमाल